China Tungsten Carbide Shaft Sleeve yePombi Kugadzira uye Fekitori | N & D Carbidhi
Zvokuimba Chisimbiso Parts
Flat Seal Mhete
Seal Mhete Nhanho
Tsika Seal Mhete
Pump Bush uye Sleeve
Tsika Bushing uye Sleeve
OIL & GAS Kuchera
API Bhora uye Seat
Kudzipwa Stem uye Seat
TC Kuyerera Zvizarira
Boora Bits kamwene
Pfeka Kuisa uye Hardfacing Chinyorwa
Pfeka Bush uye Sleeve
Valve Spare Zvikamu
Tungsten Carbide Wear Mhete
Tsika Wear Zvikamu
Chemical Machinary Zvikamu
Tungsten Carbide Pfeka Mhete
Tungsten Carbide Accelerator
Mining uye Kuchenesa Machinary
Carbide Kuchera Mhete
Decanter Centrifuge usina kukonekita
Dzimwe Tsika Wear Zvikamu
Tungsten Carbide kamwene
Tungsten Carbide Dhisiki yeValve
API 11AX Bhora uye Seat for Subsurface Rod Pump
Tungsten Carbide Bush yeMagetsi Akanyudzwa Pombi
Tungsten Carbide Flat Seal Mhete yeMechanical zvisimbiso
Yakagadziriswa Tungsten Carbide Rotary Burrs
Yakagadziriswa Tungsten Carbide Wear Zvikamu
Tungsten Carbide Shaft Sleeve yePombi
* Tungsten Carbide, Nickel / Cobalt bhainda
* Sinter-HIP Mavira
* CNC machine
* Rokunze dhayamita: 10-500mm
* Sintered, yakapera muyero, uye girazi richirova;
* Kuwedzera saizi, kushivirira, mamaki uye huwandu zviripo zviripo pakukumbira.
Tungsten carbide chinhu chisina kujairika chemakemikari chinoumba chine huwandu hweatungsten uye maatomu ecarbon. Tungsten carbide, inozivikanwawo se "cemented carbide", "hard alloy" kana "hardmetal", imhando yesimbi metallurgic iyo ine tungsten carbide powder (kemikari fomula: WC) uye imwe bhainda (cobalt, nickel. Nezvimwewo).
Tungsten Carbide - Cemented tungsten carbides inotorwa kubva kune yakakwira muzana tungsten carbide zvidimbu zvakasungwa pamwechete nesimbi ductile. Iwo anosungwa akajairwa anoshandiswa kubhurings ndeye nickel uye cobalt. Izvo zvinoguma zvivakwa zvinoenderana netungsten matrix uye muzana bhainda (kazhinji 6 kusvika 15% pahuremu nevhoriyamu).
Inogona kudzvanywa uye kuumbwa kuita maumbirwo akagadzirwa, inogona kukuyiwa nemazvo, uye inogona kusunganidzwa kana kubatanidzwa kune zvimwe simbi. Mhando dzakasiyana uye mamakisi e carbide anogona kugadzirwa sezvaidikanwa kuti ishandiswe mukushandisa kwakatemerwa, kusanganisira indasitiri yemakemikari, oiri & gasi uye yegungwa semigodhi nekucheka maturusi, chakuvhuvhu uye kufa, kupfeka zvikamu, nezvimwe.
Base pakushandiswa kwakasiyana kwevashandisi, tungsten carbide mabhushi anowanzo kuve akagadzirwa akasiyana tungsten carbide mamaki. Iwo makuru maviri akateedzana e tungsten carbide giredhi ndeye YG (cobalt) akateedzana uye YN (Nickel) akateedzana. Kazhinji kutaura, YG akateedzana tungsten carbide mabhushi ane akakwirira akachinjika ekuputsika kwesimba, nepo YN akateedzana tungsten carbide gwenzi ramba ngura zvirinani pane yekutanga.
Tungsten carbide shaft sleeve inoratidza kuomarara kwakapamhama uye simba rekutsemuka rekutsemuka, uye ine kuita kwakanyanya pakurwisa abrasion uye ngura, izvo zvinoita kuti igone kushandiswa zvakanyanya mumaindasitiri mazhinji.
Iyo tungsten carbide shaft sleeve ichashandiswa zvakanyanya kutenderera rutsigiro, kurongedza, anti-kukanda uye chisimbiso chekisiki yemota, centrifuge, mudziviriri uye mupepeti wepombi yemagetsi yakanyura mune yakashata mashandiro ezvinhu eakanyanya kumhanya anotenderera, jecha kupwanya abrasion uye gasi ngura mumunda wemafuta, senge masiraidhi anotakura ruoko, mota ekisero ruoko uye chisimbiso ekisero sleeve.
Pane sarudzo hombe yemhando uye mhando yeiyo tungsten carbide bush sleeve, isu tinogona zvakare kukurudzira, dhizaini, kugadzira, kugadzira zvigadzirwa zvinoenderana nemifananidzo uye zvinodiwa nevatengi.
TC Gwenzi Rakaumbwa Kune Referensi
Chinyorwa Giredhi ReTungsten Carbide Bush (CHETE CHOKUTAURA)
Pashure: Tungsten Carbide Moulds
Zvadaro: Tungsten Carbide Kubereka Bush
Carbide Kubereka Sleeve
Carbide Bush Sleeve
Carbide Valve Sleeve
Carbide Pfeka Chikamu Sleeve
Carbide Pfeka Sleeve
Cemented Carbide Kubereka Sleeve Bush
Yakasimbiswa Carbide Sleeve
Tungsten Carbide ekisero Sleeve
Tungsten Carbide ekisero Sleeve Bush
Tungsten Carbide Wear zvindori kuti Oil uye Gas Ind ...
Tungsten Carbide Yakapararira Dhisiki
Custom Tungsten Carbide Seal Mhete yeMechanica ...
Guanghan N&D Carbide Co, Ltd.